Barnaamijka caanka ah – Bogga 8 – Android – Vessoft
AndroidBarnaamijka caanka ah – Bogga 8
Flipboard – adeeg caan ah oo lagula socdo dhacdooyinka ugu dambeeyay adduunka. Softiweerka waxaa ku jira waxyaabo badan oo agab ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan waxayna awood u siineysaa inay doortaan isha wararka si ay ugu wargeliyaan.
MediaGet – waa qalab lagu raadiyo oo laga soo dejiyo feylasha internetka. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku sameyso raadinta faylka ku habboon bogag badan oo caan ah.
Framaroot – softiweer si aad uga hesho aaladda xuquuq-xididka ah aaladaha badankood soo saarayaasha kala duwan. Sidoo kale softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu isticmaalo qoraal gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala horumarsan.